တရုတ်နိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းကလေးငယ်များ အစိုးရဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်မှ အထောက်အပံ့ရရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ် ရှန်းရှီး ထူကျားလူမျိုးနှင့် မြောင်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည်နယ်ခွဲ ကျီစိုမြို့တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က မသန်စွမ်းသူများအတွက် ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးစင်တာ၌ ပြုလုပ်သော အခမ်းအနားတစ်ခုသို့ အကြားအာရုံချွတ်ယွင်းသည့်ကလေးငယ်တစ်ဦး နားကြားကိရိယာဖြင့်တက်ရောက်စဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ဇွန် ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းကလေးငယ် ၆၇၆,၀၀၀ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အစိုးရဦးဆောင်သော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်မှ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအထောက်အပံ့များကို ရရှိခံစားရကြောင်း တရုတ်မသန်စွမ်းသူများဖက်ဒရေးရှင်းက ယနေ့ ဇွန် ၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ပြီးခဲ့သော သုံးနှစ်တာအတွင်း မသန်စွမ်းကလေးငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်၍ ပြုလုပ်ပေးသောယင်းအစီအစဉ်မှတဆင့် အဆိုပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အကူအညီရရှိသော ကလေးငယ်အရေအတွက်သည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ဖက်ဒရေးရှင်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
လက်ရှိအချိန်ထိ တရုတ်နိုင်ငံသည် လိုအပ်ချက်ရှိနေသော ကလေးငယ်များ လျှောက်လွှာတင်သွင်းမှုနှင့်အတူ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနပေါင်း ၃,၂၀၀ ကျော် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ပေါင်း ၈,၀၀၀ ကျော် ပံ့ပို့ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းမှာ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အတိအကျအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း ဖက်ဒရေးရှင်းက ဆိုသည်။ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအနေဖြင့် အမြင် ၊ အကြား ၊ ဘာသာစကား ၊ ခြေလက် သို့မဟုတ် မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ချွတ်ယွင်းမှု ရှိနေသည့် အသက် ၆ နှစ် သို့မဟုတ် ငယ်ရွယ်သူ ကလေးငယ်များ နှင့် မွေးရာပါဉာဏ်ရည်မပြည့်သူများအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကို မြို့နယ်အဆင့် လုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ကြောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ထုတ်ပြန်သည့် အစိုးရတရားဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုရ သိရသည်။
ထိုသူများအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ချွတ်ယွင်းမှုပြဿနာရပ်များအား ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် ၊ မိမိကိုယ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရေး ဖြည့်ဆည်းပေးရန် နှင့် လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပိုမိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် စသည့် ရည်မှန်းချက်များဖြင့် အဆိုပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ထိုသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ အသုံးစရိတ်များကို ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများ နှင့် ဗဟိုအစိုးရ လက်အောက်ခံဌာနများက ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ကလေးငယ်များအတွက် အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် မသန်စွမ်းဘဝမှ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။ ဆောလျဉ်စွာစစ်ဆေးခြင်း ၊ ရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း နှင့် ကုသမှုပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ ပုံမှန် ပြန်လည်သန်စွမ်းလာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, June 1 (Xinhua) — Disabled children in China have received 676,000 rehabilitation services fromagovernment-led relief scheme since 2018, the China Disabled Persons’ Federation said Tuesday.
So far, China has tasked more than 3,200 institutions with processing the applications of children in need and designated 8,000 to provide rehabilitation services.
It has becomeanationwide scheme indeed, said the federation.
Local governments above the county level are required to render rehabilitation relief to children aged six or younger with disabilities related to eyesight, hearing, language, limbs or intelligence, as well as autism, according to an official document released in June 2018.
The target is to help them reduce dysfunction, acquire self-care skills and participate more in social activities, added the document.
The expenditure has been partly paid by local governments and subsidized by the central government.
Childhood is consideredaprime time to recover from disabilities. Early detection, diagnosis and intervention can bring conspicuous improvement in the functioning of organs
A hearing-impaired child patient attends an aural and speech rehabilitation course atarehabilitation center for people with disabilities in Jishou of Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture, central China’s Hunan Province, Oct. 15, 2020. (Xinhua/Cai Yang)